Court Diversion/RJ Panels | Burlington Community Justice Center
Weecinta Maxkamada /
Faahfaahin muuqaal ah oo ku saabsan barnaamijyada weecinta Maxkamad, daawo muuqaalkan.
Guddiyadu waa beddelka wax lagu soo celiyo ee shakhsiyaadka lagu soo oogay dambi (cidda masuulka ka ah). Waxay ka kooban yihiin kooxo 3-5 tabaruceyaal tababaran ah oo la kulma dhinacyada mas'uulka ka ah iyo kuwa saameynta ku leh, si wax looga qabto dhibaatada ay keeneen dambiyada "heerka hoose" (sida anshax xumada, been abuurka, khayaanada, xatooyada tafaariiqda iyo xumaanta sharci darrada ah). Ujeeddada guddigu waa inay la xisaabtamaan kooxda masuulka ka ah saamaynta ay ku yeesheen falalkooda kuwa kale.
Xiriiriyaha dhibbaneheennu wuxuu sameeyaa isku day kasta oo uu kula xiriiro dhinacyada ay saamaynta ku yeelatay si uu ugu sharraxo geeddi-socodkeenna una taageerno ka-qaybgalkiisa / keeda / ka qaybgalkeeda illaa heer kastoo ay ku qanacsan yihiin. Guddigu wuxuu ka hadlayaa duruufaha iyo saameynta fal dambiyeedka iyo siyaabaha qofka masuulka ahi uga fogaan karo khaladaadka la midka ah mustaqbalka.
Dembiyada qaarkood, fulinta sharciga ayaa leh ikhtiyaar marka ay si toos ah ugu gudbinayso dacwadaha CJC. Xaaladaha kale, qareenka gobolku wuxuu go'aansadaa inuu qofka u diro nidaamka maxkamadda iyo in loo gudbiyo barnaamijka Ka Weecinta Maxkamadda. Garsoorayaashu sidoo kale waxay u gudbin karaan dacwadaha qayb ka mid ah amarka xukunka halkaas oo cidda masuulka ka ah ay si wada jir ah u kormeeraan Waaxda Asluubta iyo Qaybta Adeegga Tilmaanta. Mar alla markay si guul leh u dhammaystiraan barnaamijka weecinta Maxkamadda, diiwaanka ka qaybgalaha waa la tuuri karaa (marka laga hadlayo Wareejinta). In kasta oo qandaraasyada shaqsiyeed loo qoondeeyay kaqeybgale kasta iyo baahiyahooda gaarka ah, qandaraasyada qaar waxaa ka mid noqon kara soo celinta, waraaqaha raaligelinta, qormooyinka milicsiga, ama u diritaanka wakaaladaha kale ee taageerada bulshada.
Haddii aad ka qayb qaadatay barnaamijka Ka Weecinta Maxkamad ahaan Masuul ahaan ama Xisbigay Taabatay, waxaan rabnaa inaan kaa maqalno adiga! Fadlan buuxi xogururintan aan la aqoon si aad ula wadaagto khibradaada:
Ka-qaybgalaha / Mas'uul Mas'uulka ka ah sahanka
Sahaminta Xisbiga Dhibbanaha / Waxyeelaystay
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan kaqeybgalka dariiqyada dib-u-dhiska, fadlan kala xiriir Barbara Shaw-Dorso taleefanka (802) 264-0765 ama emaylka bshawdorso@burlingtonvt.gov.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan tabaruca, fadlan la xiriir Rachel Jolly
(802) 865-7185 ama emayl ahaan rjolly@burlingtonvt.gov